@nareshadh977 @ksp176 👍 30 minutes ago
@KarkiSl @VidushiRana 👍 31 minutes ago
@SagarPandeya2 @VidushiRana 👍 32 minutes ago
@DhrubaNeupane17 @VidushiRana 👍 32 minutes ago
@BShrestha99 @VidushiRana 👍 33 minutes ago
@NeupanePrabina तिहार नजिकिदै गरेकोले होला यी सयपत्री हेर्दा मात्रै पनि मनै आनन्द आउने त छ नै सुगन्ध नै पनि आइरहेको… twitter.com/i/web/status/1… 42 minutes ago
« Iris Halmshaw, 3-Year-Old With Autism, Can’t Talk; But Her Beautiful Paintings Sell For Hundreds
The Top Five Ways to Turn Money into Happiness »
आजकाल पत्र पत्रिका, रेडियो र टिभिहरु मेरो त अन्तरबार्ता लिन समेत लालायित छन । मैले केही महिनाभित्र मलाई यहाँ सम्मान गरिंदा बनाएर पठाएका दुई क्लिपहरुबारे बताएको थिइन । के तिमीले केही अनुमान गर्यौ? ती दुबै सम्मान म आँफैले आफ्ना मान्छेहरुलाई आबस्यक सबै खर्च दिएर आँफैले गर्न लगाएका सम्मानहरु हुन । त्यस्कै करामत हो आज यी तमाम संचारकर्मीहरु मसंग नजिकिनुको रहस्य । मेरो बिरोधमा कामदारहरु भाँडन खोज्नेको गाउँमा केही काम गर्न सानो रकम के दिएको थिएँ, यू-टर्न भैहाले । पछि फेरि सहयोग गर्ने आस्वासन दिएको थिएँ, उनीहरु त मलाई सम्मान गर्न चाहेको तर सामर्थ्य नभएको कुरो गरेपछि गोप्य रुपमा आँफैले खर्च दिएर सम्मान गर्न लगाएँ । उता पहिलादेखिका आफ्ना समर्थकहरु अत्तालिन थालेको बुझेर पुन: त्यही सूत्र लगाएर उनीहरुबाट पनि सम्मान लिएँ ।
नेपालबाट आफ्ना सबै काम बिना रोकटोक गराउन बिभिन्न महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा आफ्ना मान्छेहरु राख्न शुरु गरेका छौं । थाहा छ गत महिना हामीले दुई महत्वपूर्ण ठाउँको प्रमुखमा मेरा सहपाठीहरुलाई पदोन्नति गराउन सफल भएका छौं । यो क्रम जारी रहनेछ । जुन पार्टीको सरकार भए पनि मेरो सुनुवाई नहुने भन्ने कुरै छैन । नेताहरु देश चलाउँछन हामी नेताहरु नचाउँछौं । आखिर इमान्दार नेता र कार्यकर्ताको गुन्जाइस कुन पार्टीमा पो छ र ? बुद्धको देशमा जन्मसिद्ध पाएको कुर्सी छोडेर जंगल जाने नयाँ बुद्ध फेरि के जन्मेलान र ? जसरी पनि कुर्सी हात कसरी लगाउने भन्नेमा नै सबै नेताको अधिकांश समय ब्यतित हुन्छ । यो हाम्रो लागि अत्यन्तै राम्रो अबसर हो ।
This entry was posted on July 4, 2013 at 9:05 pm	and is filed under बिबिध, लेख/ रचना /निबन्ध. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.